Telenor Business Web Shield Service
This message is automatically generated by Telenor Myanmar Web Shield Service. The web page you are trying to access is categorized as malicious or blacklisted hence blocked to deliver the most secure and reliable internet experience.
For queries and complaints, please call on 8080 or +959780008080 and
email on business.support@telenor.com.mm
တယ်လီနောလုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံစွာဝက်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
ဤစာသားကို "တယ်လီနောမြန်မာ၊ ဝက်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု" မှ အလိုအလျောက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုသည့် စာမျက်နှာသည် သုံးစွဲသူများထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း (သို့) နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခံထားရသည့်အတွက်၊ တယ်လီနော သုံးစွဲသူများ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အတွေအကြုံများကိုသာ ရရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး တယ်လီနောလုပ်ငန်းသုံးဝက်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုမှ တားမြစ်ထားပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် အကူအညီရယူလိုပါက +959780008080 (သို့) 8080 (တယ်လီနောနံပါတ်ဖြင့်သာ) သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်နိုင်ပါသည်။ တယ်လီနောမှ လုပ်ငန်းသုံးထုတ်ကုန်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.telenor.com.mm/en/business တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
To learn more about Telenor business please visit telenor.com.mm/en/business